Ahuru m ya ozo taa… ozo 2012 Influencer List. Enweghị m ike ị gafere ndepụta niile, agbanyeghị, n'ihi na m na-arụ ọrụ nke ukwuu ịsutu mbọ m ihu m wee wepụ ntutu m. Ọ bụghị ndepụta ndepụta mmetụta ọ bụla, ọ bụ naanị ndepụta ndị ọzọ ama ama. Iji jide n'aka na anyị niile ghọtara ọdịiche ahụ, ka anyị gaa n'ihu kọwaa ha abụọ:
Maka gị ndị ahịa n’ebe ahụ, enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ha abụọ. Ọ bụ eyeballs vesos nzube. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ -ahụ ihe gị… gaa maka ewu ewu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ ịzụta ihe gị… gaa maka mmetụta. Ndị mmadụ ma ọ bụ ụdị ama ama nwere ọtụtụ mmadụ na dị ka ha. Ndị na-emetụta ma ọ bụ ụdị nwere ndị nwere tụkwasị obi ha.
Ma enwetaghị ya? Otu n'ime 2012 nne kachasị ewu ewu bụ Nicole "Snooki" Polizzi. Na Twitter, Snooki nwere ndị na-eso ụzọ 6.1. Snooki nwere akara Klout nke 88. Isiokwu nke Snooki gụnyere foto, Pizza, ime achịcha, ndị agha, na akpụkpọ ụkwụ. Aha Snooki dakọtara na nne nke afọ a n'ọtụtụ ndepụta.
O doro anya na Snooki bụ ewu ewu. Ma ma ọ bụ na ọ bụghị mmetụta n'isiokwu ndị a bụ arụ ụka. Ndị mmadụ nwere ike ilegara Snooki anya maka ụdị akpụkpọ ụkwụ kachasị ọhụrụ kemgbe ọ bụ akara ngosi… ma ọ na - enwe obi abụọ na ọ ga - enyere aka ịmetụta echiche gị na ịzụta igwefoto gị ọzọ, ịzụta Pizza, ajụjụ agha, usoro esi nri ma ọ bụ ajụjụ nne na nna Anaghị m akụ Snooki… naanị na-atụ aka na Snooki mara oke ama, mana enwere mmetụta na-enyo enyo.
Nsogbu bụ ndị a mmetụta akara na ndepụta anaghị enwe mmetụta ọ bụla ma ọlị. Ndepụta Snooki dị ka onye na - eme ihe ike ezighi ezi. Ọ bụrụ na m chọrọ uche na foto, aga m achọ Paul D'Andrea. Pizza? Ana m agakwuru enyi m James nke nwere Brozinni si. Ime achịcha? Nne m.
Ghọtara isi. Ma ị na-ahụ ihe banyere ndị na-emetụta m? Ha abughi ndi a ma ama ma ha enweghi otutu nde ndi na-eso uzo ma obu ndi na akwado. A tụkwasịrị ha obi n'ihi na mụ na onye nke ọ bụla n'ime ha nwere mmekọrịta oge na-aga, ha tụkwasịrị m obi. Adịghị m discounting na-ewu ewu na ndị mmadụ nwere ike ịbụ influential ọtụtụ na-. Agbanyeghị, ana m ekwupụta na ka m nwee mmetụta, mmadụ ga-ewu ewu. Nke ahụ abụghị ikpe.
Dị ka ihe atụ nke onwe, amaara m na abụrụla m mmetụta na oghere teknụzụ ahịa. Achọla m ihe karịrị $ 500 nde maka nnweta na itinye ego na afọ ole na ole gara aga wee nye ụfọdụ ụlọ ọrụ nnukwu nduzi. Nke ahụ kwuru, enweghị m mmasị na oghere. Won't gaghị ahụ m n'elu 10 nke ọtụtụ ndepụta ma anaghị m edepụta ihe omume na mgbasa ozi na mgbasa ozi. Ekwenyere m, ọ bụrụ na edere ndepụta ndị ahụ dabere na njikwa ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi, aga m achọpụta na m họọrọ karịa. Nke ahụ abụghị mkpesa… naanị nchọpụta.
Ọ dị anyị mkpa ịchọta ụzọ ka mma ịmata ọdịiche dị n'etiti mmetụta na ewu ewu, n'agbanyeghị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọpụta ndị na - eme ihe ike na itinye ego na ndị nwere mmetụta iji nyere aka kesaa ngwaahịa na ọrụ ha. Agbanyeghị, ndị na-ere ahịa ga-ezere igbu ego na ndị na-ewu ewu naanị anaghị emetụta ihe ọ bụla.